Ogaden News Agency (ONA) – Cimrigii maamulka Cabdi Ilay wuxuu kusoo dhamaaday in Ayeeyo boqol jir ah la daldalo! By- Xaaji M/rashiid.
Cimrigii maamulka Cabdi Ilay wuxuu kusoo dhamaaday in Ayeeyo boqol jir ah la daldalo! By- Xaaji M/rashiid.
Posted by Daljir	/ December 7, 2017
Caalamku wuxuu ka dharagsanyahay in Shacab,waynaha Soomaalida Ogadenya la daalaa dhacayo hardanka u dhaxeeya iyaga iyo kooxda maamul kusheega TPLF iyo maleeshiyada uu ku adeegto ee soomaalida ah. Hadii si hoose loo wareysto shacabka waxay soo tabinayaan dhacdooyin dhamaantood wada ugub ah oon horay gayiga loogu maqal looguna arag. Markaan qiyaasay sida ay ku imaan karaan falalkaasi waxaan dhaafin waayay in maamulka cabdi ilay uu si toos ah uga amar qaato Shaydaanka!
Magaalada jigjiga oo caasimad u ah maamulka kabo,qaadka ah ee Woyaanuhu sameystay waxaa caado iyo cibaado ay ka dhigteen daadinta dhiiga dadka aan is difaaci karin oo horin horin loosoo raafo kadibna lagu shubo jeelasha bilaa xuquuqda ah ee Jigjiga!. Dadwaynaha ku nool jigjiga xaalkoodu waa dhari ku aadaan mana jiro ruux kor u ooyi kara xataa hadii caawa dad iyo duunyo waxay lahaayeen cagta lamariyo!
Todobaadkii lasoo dhaafay waxaa jigjiga ka dhacay sida ay sheegtay warbaahinta udoodda xuquuqda shacabku qiso aan ku tilmaami karo sheeko reebtii Qarniga taasoo cid kasta oo maqasha ku reebi karta yaab iyo afkalaqaad! waqtigan oon qalinka ku hayo faalada dilka Ayaydeen Canbaro sheekh Dayib waa mid saamayn ku keeni karta ruuxii damiir insaaniyad leh!
Ayeeyo Canbaro Rabi ha u naxariistee oo cimrigeeda lagu sheegay ugu yaraan 100 sano waxaa lagu daldalay xaafad jigjiga kutaala. Dilka Ayeeyo Canbaro wuxuu muujinayaa inuuna maamulka cabdi ilay cidna u turi doonin! Sida horay loo arkay dadka ku dhiirada laynta dadka gaboobay waa kuwa ugu nasiibka daran. Aduunka cidhib kuma yeeshaan Aakhirana waa laga dayrinayaa! Waxaa dhici karta inay la kulmaan calaamaad aan horay loo arag maadaama ay iyagu sameeyeen fal aan horay loo arag! si kastaba ha ahaatee inkaarta Ayeeyo ayaan filayaa inay soo dadajin doonto dabargo’a hawaarinta iyagoo markii horaba liitay!
TACSI- INNA LILLAHI WA INNA ILAYHI RAAJICUUN!
Anigoo ku hadlaya magacayga iyo muuqayga qarsoon waxaan Tacsi udirayaa guud ahaan shacabka Soomaalida Ogadenya Daldalaadda kutimid Ayeeyo Canbaro Skheekh Dayib Xaaji Barkhadle oo kooxda Cabdi ilay gacantooda ku baxday maalmo kahor! Ilaahay danbigeeda ha u dhaafo, hana u naxariisto, Eheladiina samir wanaagsan iyo xasanaad haka siiyo Aamiin.
Ugu danbayn waxaan qoraalkan kusoo koobi lahaa maah,maah carbeed oo tidhaaha- Yowmun laka, wayowmun caleyka! oo micnaheedu yahay- Maalin adigaa leh, maalina iyadaa kuleh!